Nhetembo shanu dzakanakisa dzerudo | Zvazvino Zvinyorwa
Kupenda «Iyo Kiss» naGustav Klimt
Vanoti izvo zvinonzwisiswa nhasi nerudo hachisi rudo rwechokwadi ... Rudo irworwo rwaive chinhu chekare apo vakaroorana vakapedza makore mazhinji vari pamwechete uye "vakaregerera" zvimwe zvinhu. Kutaura nezverudo uye kurukoshesa kana kuti kwete rwakadai inyaya "inonetsa" nekuti hapana munhu anofanirwa kutonga nemanzwiro anoita mumwe kana neumwe uye nehukuru hwavanozviita, nekuti iye ega ndiye anogona kuzviziva ...
Asi ... nei ndiri kutaura nezverudo pane peji rezvinyorwa? Nekuti kunyangwe kana risiri Zuva reValentine, zvaitaridzika kunge zvakanaka kuunganidza nhasi izvo zvandinofunga 5 nhetembo dzerudo dzakanakisa dzese nguva. Chinyorwa chakazvimiririra zvachose asi nechinangwa chakajeka: Kusimudzirwa kwerudo nhetembo.
1 Chipfuva Mwoyo (Mario Benedetti)
2 Ndinokuda pagumi mangwanani (Jaime Sabines)
3 Kana iwe uchindida, ndide zvakakwana (Dulce María Loynaz)
4 Ndinogona kunyora mavhesi anosiririsa manheru ano ... (Pablo Neruda)
5 Rusingaperi rudo (Gustavo Adolfo Bécquer)
Chipfuva Mwoyo (Mario Benedetti)
Nekuti ndine iwe uye kwete
nekuti ndinofunga nezvako
nekuti husiku hwakazara maziso
nekuti husiku hunopfuura uye ndinoti rudo
nekuti wauya kuzotora mufananidzo wako
uye iwe uri nani kupfuura ako ese mapikicha
nekuti iwe wakanaka kubva kutsoka kusvika kumweya
nekuti wakanaka kubva kumweya kwandiri
nekuti unovanza zvinotapira mukuzvikudza
nekuti uri wangu
nekuti hausi wangu
nekuti ndinotarisa kwauri uye ndinofa
uye zvakaipa kupfuura kufa
nekuti unogara uripo pese pese
asi iwe uriko zvirinani pandinokuda
Nekuti muromo wako ropa
uye uri kutonhora
Ndinofanira kukuda iwe rudo
kunyange hazvo ronda iri richirwadza kunge maviri
kunyangwe ndikakutsvaga ndikakushaya
husiku hunopfuura uye ndinemi
Kupenda «Iyo Kusvoda» naThophile Alexander Steilen
Ndinokuda pagumi mangwanani (Jaime Sabines)
Ndinokuda pagumi mangwanani, uye pagumi nerimwe,
uye nenguva dzegumi nembiri. Ndinokudai nomweya wangu wose uye
nemuviri wangu wese, dzimwe nguva, mumasikati ekunaya.
Asi panguva mbiri masikati, kana panhatu, apo ini
Ini ndinofunga nezve isu vaviri, uye iwe unofunga nezve iyo
chikafu kana basa rezuva nezuva, kana mafaro
iyo yausina, ndinotanga kukuvenga matsi, ne
hafu yeruvengo ndinozvichengetera.
Ipapo ndinokuda zvakare, patinoenda kunorara uye
Ndiri kunzwa kuti wakagadzirirwa ini, izvo neimwe nzira
ibvi rako nedumbu rako zvinondiudza izvo maoko angu
ndisimbise nezvazvo, uye kuti hakuna imwe nzvimbo mukati
kwandinoenda, kwandinoenda, zvirinani kwauri
Muviri. Iwe unouya kuzosangana neni, uye
isu tose tinonyangarika kwekanguva, tinopinda
mumuromo waMwari, kusvikira ndakuudza kuti ndinazvo
nzara kana hope.
Zuva nezuva ndinokuda uye ndinokuvenga zvisina tariro.
Uye kune mazuva zvakare, kune maawa, kana zvisiri
Ndinokuziva, pakuti uri mutorwa kwandiri semukadzi
yeumwe, ndinonetseka nezvevarume, ndinonetseka
Ndiri kutsauswa nekusuwa kwangu. Iwe pamwe haufunge
mamuri kwenguva yakareba. Iwe unoona ndiani
ndingakuda zvishoma kupfuura zvandinoita zvangu here?
Kana iwe uchindida, ndide zvakakwana (Dulce María Loynaz)
Kana uchindida, ndide zvakakwana
kwete nenzvimbo dzechiedza kana mumvuri ...
Kana iwe uchindida, ndide ini mutema
uye chena, uye grey, girini, uye blonde,
uye brunette ...
ndide husiku ...
Uye mangwanani-ngwanani pahwindo rakashama! ...
Kana uchindida, usandigura.
Ndidei mose ... Kana musandide!
Kupenda «Kutsvoda» naRene Magritte
Ndinogona kunyora mavhesi anosiririsa manheru ano ... (Pablo Neruda)
Ndinogona kunyora mavhesi anosiririsa manheru ano.
Nyora, semuenzaniso: «Husiku hwakazara nenyeredzi,
uye nyeredzi dzinodedera kure, nebhuruu. "
Mhepo yemanheru inotendeuka mudenga uye inoimba.
Ndaimuda, uye dzimwe nguva aindidawo.
Husiku hwakadai ndakamubata mumaoko angu.
Ndakamutsvoda kakawanda pasi pedenga risingaperi.
Aindida, dzimwe nguva ndaimudawo.
Sei kusamuda iye mukuru achiri maziso.
Kufunga kuti handina iye. Kunzwa kuti ndamurasa.
Inzwa husiku hukuru, kunyangwe asina iye.
Uye iyo ndima inowira kumweya sedova kune uswa.
Zvine basa here kuti rudo rwangu rwakatadza kurichengeta.
Husiku hwakazara nenyeredzi uye haasi neni.
Ndizvo. Nechekure mumwe anoimba. Kure.
Mweya wangu hauna kugutsikana nekuzvirasa.
Sokunge kuti kumuunza padhuze, maziso angu anomutsvaga.
Mwoyo wangu unomutsvaga, uye haasi neni.
Husiku humwechete kuchenesa miti imwechete.
Isu, ivo ipapo, hatina kufanana.
Ini handichamuda, ichokwadi, asi kumuda kwandaiita.
Izwi rangu rakatsvaga mhepo kuti ribate nzeve yake.
Yeimwe. Ichave ichibva kune imwe. Sezvo ndisati ndatsvoda.
Inzwi rake, muviri wake wakajeka. Maziso ake asingagumi.
Ini handichamudi, ichokwadi, asi pamwe ndinomuda.
Rudo ipfupi, uye kukanganwa kwakareba.
Nekuti pahusiku hwakadai ndakamubata mumaoko angu
Kunyangwe uku ndiko kurwadziwa kwekupedzisira kwaanondikonzera,
uye aya ndiwo mavhesi ekupedzisira andinonyora.
Rusingaperi rudo (Gustavo Adolfo Bécquer)
Zuva rinogona kusvibira nekusingaperi;
Gungwa rinogona kuoma kamwechete;
Iyo axis yePasi inogona kutyorwa
Sekristaro isina kusimba.
Zvese zvichaitika! Dai kufa
Ndifukidze neyakavigwa crepe yake;
Asi haigone kudzimwa mandiri
Murazvo werudo rwako.
Uye yeizvi, nderipi nhetembo raunonyanya kufarira? Ndeipi nhetembo yako yaunofarira yerudo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Nhetembo shanu dzerudo
Selis Canache akadaro
Ini ndinogara netsika, nhoroondo uye kusangana, naNeruda; asi pakuzivikanwa uye kuda ndinomira neSabines.
Ingozi yakadii inoitwa kana uchisarudza zvivakwa izvi kune izwi uye idyll.
Ndakatora njodzi ndikainakidzwa.
Pindura Selis Canache
Nhetembo idzi dzakanakisa, zvisinei hazvo zvimwe zvidiki, seni, ndinoda nhetembo dzakareba zviri nani.
Nhetembo 20 ichiri kunyorwa neni !!
Zvimwe ndosaka ndichiifarira.
Zvakaoma sei kusarudza iyo yandinoda zvakanyanya.Mumwe neumwe wavo pane akasiyana manzwiro uye nehukama nyika, asi ini ndinogara naNeruda.
Mukuyaruka kwangu ndaida Becquer. Muhuduku hwangu kuna Neruda. Uye pakupedzisira Tenzi Mukuru akabata moyo wangu, uye nhasi ndinomuda kupfuura chero munhu: Grsnde Benedetti.
Hugolina G. Finck naPastrana akadaro
Chokwadi, ivo vadzidzisi vangu uye ndinoda kuona nhetembo dzangu dzichitsikiswa nekuti ndinoziva kuti ndiri mudetembi mukuru.
Pindura Hugolina G. Finck uye Pastrana
Ini ndaida Bécquer chaizvo, asi pasina kupokana nhetembo yaNeruda yagara ichiba kukosha kwemoyo wangu. Axrr.
Ndinofunga nhetembo dzangu dziri nani
Jorge Roses akadaro
Ndakaverenga Becquer ndiri jaya, ipapo vamwe. Mune ese avo ini ndagara ndichiwana mavhesi akabiwa kubva kuBecquer, kunyanya Neruda. Hazvisi nyore zvachose kugadzira nhetembo yepamusoro, dzimwe nguva inogona kungovandudzwa kune zvekare, kunyangwe izvo zvisiri nyore kuwana kana.
Pindura Jorge Rosés
John Harold Perez akadaro
Rudo kana chishuwo chinondisarudzira iwe, kukunda nguva dzako.
Uye ndakatsunga kuti sei ndakazvipira kunyarara kwako, kukuseka kwako, kunaka kwako uye kufungidzira muviri wako.
Kuda kana whim, ndakasiya kurota nezvekutsvoda kwako, kuti uwane kumbundirana kwakawanda, kuhwina kambani yako uye ndakarota ndichigara mupfungwa dzako.
Nhasi ndinoziva zvaunombundirwa zvakanyanya uye ndinoziva mhando yekutsvoda kwako.
Uye zvakadaro ndinonzwa sekutanga, nekuti takafambira mberi muzvinhu zvakawanda, uye ikozvino ndarota nezvekambani yako, yemaawa ako. Nemi padivi pangu muchindiperekedza nekuseka.
Asi yako nguva haisi yako nguva ...
Uye ini ndinofunga nezvako zuva rese ndisingazive kuti iwewo wakakunda pfungwa dzako here
Pindura kuna John Harold Pérez
Ini ndinonyatsoda moyo waMario Benedeti
Runako rwe nhetembo, kuti pachagara paine munhu anozotiendesa kune mamwe mashiripiti, aine mavhesi mashoma, vamwe vachena vamwe vakachena, Nyika yaizosiyana sei dai paine VANHU vakawanda vakaita saivo nevamwe akaona imwe nyika mukati meiyi nyika. NERUDA .. nokusingaperi mudzidzisi ...
Pindura kune arlex
Francisco Jimenez Campos akadaro
Benedetti, nekuti anononoka, anonamira mukunzwa uye anokuita kuti unzwe ndima.
Pindura kuna Francisco Jiménez Campos
Idzo nhetembo shanu dzinonzi dzakanakisa hadzina musoro. Ndakaverenga zvirinani pane izvo zvakaburitswa, zvinobva pamoyo mumwe chete.
pachena Pablo Neruda
Edheni brun akadaro
Vese vakanaka, uye ivo vanoziva nzira yekusvitsa trabecula yega yemoyo.Ndiri kuenda naNeruda nekuti ndinodawo Chilean red waini, Valparaíso uye conger muto.
Pindura Edeni Brun
Ndinokusemesa, wakanaka! Hahaha, kwaziso kubva kumberi. Xdxd
Humberto Valdes Perez akadaro
Pindura Humberto Valdés Pérez
Patts avila akadaro
Zvakaoma kusarudza imwe kana munhu wese asvika pamwoyo nenzira yakasarudzika -Becquer, Neruda - uhmm Benedetti nevamwe vasina kutaurwa nezvaJulio Flores, Acuña - huru isingakanganwike tenzi mweya!
Pindura Patts Avila
Huye, munhu wese ari pachokwadi nezvevanyanduri vane mukurumbira, asi kune vamwe vasina mukurumbira uye vanonyora nhetembo dzakatonyanya kudanana kupfuura dzakakurumbira, semuenzaniso:
Joan Mengual - ndinokupa iro rose
Nhasi ndinounza ruva
iyo isingabereki minzwa,
kukupa iwe mukadzi,
nekuti uri shamwari yangu,
mudiwa akatendeka uye shamwari.
Uye ndinokutendai mese zvikuru nekundiverengera. Kwaziso
Alex Planchart akadaro
Ndakagara ndichikweverwa kudetembo rakamutswa nomweya wakasiya basa pakurwadziwa kwechiitiko chekare. Uye mupfungwa iyoyo nhetembo yaAmado Nervo yakanzi Cowardice inouya mupfungwa:
Zvakaitika naamai vake. Runako runoshamisa sei!
Iyo yakatsvuka garzul gorosi bvudzi!
Rwiyo rwakadii nhanho! Imba yehumambo yakadii
mutambo! Ndeapi maumbirwo pasi peye yakanaka tulle ...
Zvakaitika naamai vake. Akatendeuka musoro wake:
Akandigadzirisa neziso rake rebhuruu!
Ndakanga ndichifara ... Nekukurumidza kupisa,
"Mutevere!" Akachema muviri nemweya zvakafanana.
... Asi ndaitya kuda kupenga,
kuvhura maronda angu, ayo aigara achibuda ropa,
Uye kunyangwe nyota yangu yenyoro,
kuvhara maziso angu, ndakamurega apfuura!
Pindura kuna Alejo Planchart
Marcela Campos Vazquez akadaro
nguva dzose kana uchiverenga mitsara yemunyori, ivo vanonyanya kuita kuti moyo wangu uteme
uye iwe unofanirwa kuve unodzivirirwa pakunzwa kwerudo, kurwadziwa kana chero kumwe kunzwa, kufunga kuti pfungwa inokwanisa kunzwa kutapurirana uye kusvika zvakatowanda ipapo, uchibudirira mune vamwe vanhu sekufamba kwega kupfuura chokwadi, asi rwendo rwakanaka zvakadii, ndizvo uye zvichave kunzwa rudo kune chero ani anoita kuti amuke
Pindura Marcela Campos Vàzquez
DAYANA MICHEL akadaro
RUDO CHINYANGANISO NDOSAKA NDISINGATENDE MURUDO
Pindura kuna DAYANA MICHEL
RUDO KUNYANYA USATENDA mazviri
Neruda, Dante naHomero ndivo vakanyanya kunaka. Parizvino, vadetembi veSpanish ndivo vakanyanya kunaka pasirese.
JAIME RAMOS KUSVIRA. akadaro
NDINOFANIRA Nhetembo yaBÉCQUER, SALAVERRY, BARRETO, MELGAR, GONZÁLEZ PRADA, MARTÍ NEVAMWE.
Pindura JAIME RAMOS KUSVIRA.
IN Nhetembo NDINONAKA KUNAKIRA NAKANAKA BATA. NDAPOTA POST ZVANDINODA SEMUDI WENHEMA NETSVIRA. NDINOFANIRA Nhetembo yaBÉCQUER, SALAVERRY, BARRETO, MELGAR, GONZÁLEZ PRADA, MARTÍ NEVAMWE.
Arnulfo Fernandez Mojica akadaro
Nhetembo shanu, dzekunyorwa kwakasiyana uye chimiro chemahara mukujekeswa, pamwe nedhinomineta kuRudo pakati pevakaroorana, imwe neimwe yekuongorora nekuratidzira kuti vanzwisise nyanduri nanyanduri, ndinoratidzira rusununguko rwekudurura pfungwa dzekunzwa kuburikidza nemanzwiro ehusimbe, echishuwo. , zviitiko uye zvishuwo.
Ndedzipi nzira dzavakashandisa kunyora nhetembo idzi, dziya dzaBenedetti naSabines uye nedzemvura yekunyora? Kutenda nekuzivisa.
Pindura kuna Arnulfo Fernández Mojica
Christian Rodriguez akadaro
Zviripachena ndainzwa zvinhu kwauri ... ini ndichiri kuzvinzwa, iwe unoziva kuti ndinokuda uye izvo zvandakaona newe zvaishamisa, ndakasvika pakukuda zvakanyanya zvekuti pandakanga ndinewe mumaoko angu ndakanga ndisingade kuenda iwe, asi ini ndaigara ndiri wechipiri muhupenyu hwako uye zvido zvangu zvekukwanisa kukuda, vaigara varipo kunyangwe ndaisakwanisa kugara ndichikubata ... Wakanga uri chinguva muhupenyu hwangu, iyo nguva yakandizadza nemufaro ... Nguva dzose uye usatombomira kufunga nezvako, kunyangwe chinhambwe nekushaikwa kwawakandiita Yakanga iri nguva yekukukanganwa, asi manzwiro angu akaita kuti ndienderere mberi uye kumirira iyo chaiyo nguva yekuyedza kukuda zvakare ... Ndakagara ndichiuya kufunga kuti paizove nekanguva muhupenyu hwedu uye isu taizoedza zvakare kuyananisa nekudzosa nguva dzese dzakanaka dzatinorarama tisingatore pfungwa yemunhu .. AUTHOR CHRISTIAN….
Pindura kuna Cristian Rodriguez
Pindura kune pepa
Mhoro, izvi zvakandibatsira zvakanyanya muSpanish yangu homuweki, asi nhetembo "rudo rwekusingaperi" yaive yakanaka kwazvo
Miguel Quispe akadaro
Dzese idzi nhetembo shanu dzakanyanyisa kushamisa, asi munyika yerudo, zvisinei kuti unoda zvakadii, maviri chete anopenya nehurefu hwakaipisisa, uye ndiNeruda naGustavo Becker.
Nhetembo yakataurwa pano naNeruda haidaviriki asi iinewo mamwe akatokwirira. Benedetty mhando yetambo pamwechete mitsara yakawanda uye achiri nyore mazwi. Ndakashamiswa nhetembo yaLoynaz uye yeSabata shanu iye anotora nzvimbo yechishanu.
Pindura Miguel Quispe
Nhetembo shanu dzakanaka. Ngatiregei kuenzanisa. Ngativei netariro, uye tipe rusununguko kuna nyanduri wedu akarara. Munhu anoda hunyanzvi uhwo hune nhetembo. Ndapota rudo.
Estefany perez akadaro
Ini ndinogara naSabines, nzira yakadii yekuratidza rudo rwechokwadi.
Pindura Estefany Perez
Ese mashanu akanaka, nhetembo inopa zvinoreva kuvapo uye rudo. Ndinoomerera navo vese, asi zvakanyanya nebasa raPablo Neruda.
Ndakafarira nhetembo yakanzi rudo rwusingaperi
Ndakafarira rudo rwekusingaperi
Ndakafarira nhetembo dzese nekuti ukazozviongorora unoona kuti idombo asi nhetembo yandinoda yerudo idenderedzwa regoridhe raDADH
iri iri pamusoro pekumiririrwa kwemudiwa wake mune anima uye iye anoziva kuti vanhu vazhinji vanomuda asi iye anonyatsomuda kupfuura chero ani zvake.
Ndima yekutanga inoenda chinhu chakadai.
ndiyo hedgehog yegoridhe.
Iyi nhetembo yakanyanya kukosha asi inomiririra kusuwa uye kusuwa kushuvira uko mukomana uyu anako kwaari.
Rudo rusina magumo.
Ndakafarira nhetembo yakanaka iyoyo.
Cesar Martelo akadaro
Zvakanakisa: Kana uchindida, ndide zvakakwana (Dulce María Loynaz)… pavanoramba vasingakugamuchire sezvauri.
Pindura kuna César Martelo
Pamwe ndini dambudziko, asi kunyangwe ndikaverenga zvakadii, hapana chandingawana munhetembo idzi.
Handioni iwo mashiripiti nzeve, iyo yandinowana mune dzimwe nhetembo dzakawanda uye mune akawanda mazwi evanyori-vanyori vanyori.
Asi sezvandinotaura, ndinofanira kunge ndiri "weirdo."
Ini ndinowanzo nyora nhetembo kunze kweidzi, uko kwandinopa puns uye acoustics zvakanyanya kukoshesa pane "kuvhara" kwerudo.
Nhetembo idzodzo dziri kubva pakaitwa nhetembo. Izvo zvichiri kuitwa, asi kune mamwezve aripo "enhetembo" mafungu anokwanisa kutitungamira kune wepfungwa ... Nei uchinyora chinhu chisina anonzwisiswa? Zvisinei, pane anoverenga ...
uao. Uff, ibasa rakaoma kukwanisa kukodzera kunaka kwenhetembo, uko kusingaperi, mune nhetembo shanu dzakanaka. Ivo vakanaka kwazvo. Munhu wese.
Ndinoita nhetembo uye ndinofunga ndizvo zvinodiwa nenyika, rudo.
Rimwe zuva ini ndingade kusvika pakukwirira kwezvakakura zvisikwa.
edgard marin akadaro
Ini ndinogona kunyora anosiririsa mavhesi manheru ano neruda. nhetembo yakanaka kwazvo, ini ndaifarira ndeimwe yenhetembo idzo dzinokutenderedza nekukutakura munguva uye unodzokorora iwo mashiripiti erudo awakambove nawo ndokurega achienda
Pindura kuna edgard marin
RAUL CHAVEZ OLANO akadaro
Ini ndinoda nhetembo yaBecquer, yakapusa, yakatendeseka, yakajeka, yakajeka.
Pindura kuna RAUL CHAVEZ OLANO
Benjamin Diaz Sotelo akadaro
RUDO RUSINGAPERI naGustavo Adolfo Bécquer
Pindura kuna Benjamín Díaz Sotelo
Nhetembo yandaifarira zvakanyanya ndeye RUDO RUSINGAPERI naGustavo Adolfo Bécquer
Nhetembo yaMario Benedetti, Cuirass Moyo. Rakanaka chete!
Iyo goblin akadaro
Zvinoenderana nani nhetembo dzakanakisisa? Ivo vakanaka, asi hapana munhu anopiwa simba rekuzviyera seakanakisa; Iwe unofanirwa kuremekedza zvinofarirwa nemunhu wese, ini ndinoda nhetembo dzaJose Angel Buesa naRafael de León
Pindura kuThe Duende
Nhetembo dzakanaka kwazvo, dzasvika pakadzika kwemweya wangu nemoyo. -Gustavo Woltmann.
WANDINODA, »RUDO RUSINGAPERI«
Rudo. Ini ndichafanirwa kuhwanda kana kutiza.
Masvingo ejeri rake anokura, sekurota kunotyisa.
Iyo mask yakanaka yakachinja, asi senguva dzose ndiyo yega […]
Kuva newe kana kusava newe
ndicho chiyero chenguva yangu […]
Izvo, ndinoziva, rudo:
kushushikana uye kuzorora kwekunzwa izwi rako,
kutyisa kwekurarama pano shure.
Ndirwo rudo nengano dzaro,
nemashiripiti avo asingabatsiri.
Zvino mauto ave kuswedera, mhomho ..
Zita remukadzi rinonditengesa.
Mukadzi anorwadziwa muviri wese ».
Rafael Hernandez-Ramirez akadaro
Ini pasina mubvunzo ndinofarira nhetembo yaGustavo Adolfo Bequer.
Pindura kuna Rafael Hernandez Ramirez
ahhh nhetembo, ndiani angararama pasina iyo, kana ichizadza mweya, kana ichiita kuti ukwire kudenga, ubhururuke pamapapiro emhepo, kurota, kuseka, kuchema, ndeapi nhetembo dzakanaka, zvakaoma kutaura zvandisina kufarira Poshi. Rakakomborerwa zuva iro varume ava vakazadza mweya yavo nekurudziro yekunyora nhetembo dzakanaka kudaro. Pamazuva akasuruvara, pamazuva akashata, pamazuva akanaka, nhetembo dzinozadza mweya. Akakukomborera, ohh Nhetembo dzakanaka.
Amor Eterno, naGustavo Adolfo Bécquer, pasina kupokana… Imwe yenhetembo dzangu dzandaifarira.
Vechidiki Vakuru vs Nyowani mukuru
Gijon inopemberera La Semana Negra, iwo mutambo wakakura kwazvo wekuvhura mweya muEurope